जान्नुस् केटी जिस्काउने कुन तत्व हुन्छ केटामा ? - Aajako Nepali Khabar
कहिले काहिँ मलाई पुल्चोक वा रत्नपार्कको ओभरहेड ब्रिजमाथि बसेर सिटि बजाउँदै केटा जिस्काम् जस्तो लाग्छ, कहिले लाग्छ बाटो हिड्दै गर्दा अगाडि हिड्दै गरेको केटालाई कागजको डल्लो बनाएर हानुम्, छिर्की हानेर लडाइदिम् वा धक्का दिम् तर, अहँ अहिलेसम्म यसो गरेको छैन।
यस्तो मलाई लागेको मात्र हो। यसरी जिस्काएपछि मलाई कस्तो अनुभूति होला भनेर जान्न मात्र मन लागेको हो खासमा। अरू क्यै होइन। साँच्चै भन्नुपर्दा बाटोमा हिड्ने, गाडीमा उभिँने, बस्ने वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा रहेका महिला तथा किशोरीहरूलाई जिस्काउँदा पुरुष प्रजातिका मान्छेहरुलाई कस्तो फिल हुन्छ?
उनीहरुलाई र हामीलाई हुने फिल फरक होला त भन्ने जान्नको लागि मलाई पनि त्यसरी जिस्काम जस्तो लागेको मात्र हो। तर, त्यो आँट ममा कहिले आएन। शायद कहिले जिस्काउन्न पनि। केटिलाई केटाले जिस्काउँदा उसलाई जस्तो हुन्छ शायद केटालाई केटिले जिस्काउँदा पनि त उसलाई उस्तै होला नि! अप्ठ्यारोको हिसाबले मनमा यस्तै कुरा आउँछ।
यो लेख्नुअघि मैले मेरा केहि केटा साथीलाई सोधेँ, ‘कहिले केटी जिस्काएको छ?’ केहिले छ भने केहिले छैन। छ भन्नेहरुलाई फेरि सोधेँ। किन जिस्काउँथ्यौ? जिस्काएपछि कस्तो फिल गर्थ्यौ? उनीहरुको सामान्य जवाफ, ‘जस्ट टाइम पासको लागि, रमाइलो गर्न जिस्काउँथ्यौँ, अरु केहि थेन।’ केहिलाई सोधेँ दिदी बहिनीसँग हुँदा कसैले उनीहरूलाई जिस्कायो भने के गर्छौ- जान्छु नी गोद्न। कस्तो हाँस्यास्पद कुरा। त्यही काम आफूले गर्दा भने रमाइलो अरूले गर्दा भने रिस उठ्दो।
मलाई अझैपनि मेरो किशोरावस्थाका केहि घटनाहरु याद छ- जतिबेला म एक्लै स्कुल जानआउन धकाउँथेँ। एक्लै पानी लिन जान डराउँथे । स्कुल २०- २५ मिनेट हिँडेर पुगिन्थ्यो तर पनि धेरै जस्तो स्कुल एउटै समयमा छुट्ने र लाग्ने भएकाले एउटै बाटो प्रयोग गर्न पर्थ्यो। जस्ले गर्दा बाटोमा हिँड्दा आफूसँग बहिनीहरू भए भने मलाई सजिलो लाग्थ्यो। उनीहरुसँग गफ गर्दै घर पुग्दा कसैले जिस्काओस केहि भनोस् केहि मतलब लाग्दैन थियो। तर, कुनै दिन उनीहरु छैनन् भने मलाई घरदेखि स्कुल पुग्न पार गर्नु पर्ने दुईवटा पुल नआइदिए हुन्थ्यो जस्तै लाग्थ्यो।
स्कुलबाट घर पुगेर खाजा खाइवरी पानी लिन अझै टाढा जानु पर्थ्यो जुन झन महाभारत लाग्थ्यो। घरबाट धारा पुग्न १५ मिनेट जति लाग्ने बीचमा फुटबल चौर थियो। खेल रोकेर बाटोमा हिड्ने हामीलाई जिस्काउन तिर लाग्थे केटाहरू। कुनै दिन पानी लिन जानु नपर्दा युद्वमा जानु नपरेको जस्तो लाग्थ्यो। एक्लै जानु पर्दा एक्लै युद्धमा गए जस्तो। म आफूलाई ‘यित्रो भुन्टी’ छु सानी मसिनी कसैले जिस्काउन्नन् भन्थेँ। तर, होइन रहेछ जस्तो लाग्यो। दुई खुट्टामा उभेको देख्नु पर्छ मान्छेले बच्चादेखि बुढी कसैलाई बाँकी राख्दैनन् जस्तो लाग्यो।
जिस्काउने नजिस्काउने प्रशंगमा याद आयो- एक दिन अफिसबाट घर जाँदै थिएँ शंखमुलको साँघुरो पुलमा स्कुटर बिस्तारै पार हुँदै थियो। विपरित दिशाबाट आएको बाइकको मान्छेले म नजिकै आएर चोसो पसारेर जिस्कायो। रनक्क रन्किए जिब्रो निकालेर केटाकेटीलाई जस्तो जिस्काइदिएँ उल्टो।
यस्ता घटनाहरु हामी केटीहरुका लागि सामान्य प्रायः हुन्। प्रतिक्रिया जनायौँ भने त्यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि भइदिन्छ।
म कहिले काहिँ सोच्छु केटीले छोटो लुगा लगाएको देख्दा केटालाई जिस्काउन, दुर्व्यवहार गर्न प्रेरणा मिल्छ भने केटीलाई पनि त केटाले छोटो लुगा लगाएको देखेपछि जिस्काउन, दुर्व्यवहार गर्न मन लाग्नु पर्ने हो नी होइन?
म र मेरा साथीहरू किन बाटोमा हिड्ने केटाहरूलाई जिस्काउन्नौँ? बाटोमा सवारी जाम परेको बेरा छेउको बाइकवालालाई किन म घुरेर हेर्दिन जसरी अर्को बाइक वालाले मेरो शिरदेखि पाउसम्म हेर्छ।
मलाई किन कोहि केटा देखेर उसलाई चोसो पसारेर जिस्काउँ जस्तो लाग्दैन। पुरुष प्रजातिका मान्छेमा आखिर कुन तत्व हुन्छ जस्ले गर्दा उसलाई महिला देख्दा जिस्काउन मन लाग्छ वा उसको अन्तरआत्माले उस्लाई भन्छ जा त्यो केटीलाई जिस्का।
त्यस्तो के चाहिँ हुन्छ उसमा जस्ले सवारी साधनमा महिलालाई धक्का दिन नियतबस गोप्य अंगमा छुन तथा हेर्न उक्साउँछ। आखिर उसमा कुन कुरा छ जुन कुराले आफ्नै पारिवारिक नाता भित्र पनि यौन दुर्व्यवहार गर्न प्रेरित गर्छ।
भन्नुहोला यहाँको सामाजिक संरचनाले केटीलाई लजालु बनाएको छ। उनीहरूको स्वभावले केटालाई जिस्काउन दिँदैन। त के यहाँको सामाजिक संरचनाले केटालाई गतिछाडा हुन सिकाएको छ – यहाँको सामाजिक संरचनाले केटालाई आफ्नै दिदी बहिनी समानका महिला किशोरीहरुलाई दुर्व्यवहार गर्न सिकाएको छ?
यहाँको सामाजिक संरचनाले केटाहरुलाई आफ्नै दिदी बहिनीहरुमाथि यौन दुर्व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको छ? सामाजिक संरचनाले नैतिकता भन्ने कुरा केटाहरुलाई कत्ति पनि सिकाएको छैन त त्यसो भए?
सबै केटाहरुलाई एउटै डोकोमा राखेर हेर्न पक्कैपनि मिल्दैन। यो लेख पढ्ने कतिपय सज्जन वृन्दहरुले माथि उल्लेखित गतिविधि गर्नुभएको होला वा नगर्नुभएको होला। हल्का रमाइलो वा टाइम पासको रूपमा मात्र कसैलाई जिस्काउने गर्नुभएको छ भने उसको स्थानमा आफूलाई राखेर हेरौँ आफ्नो दिदी, बहीनी, श्रीमति, गर्लफ्रेण्ड, छोरीलाई राखेर हेरौँ अनि सोचौँ त्यतिबेला तपाईलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ।
यदि तपाईले जस्तै कसैले तपाईको छोरीलाई जिस्काइदियो भने? यदि तपाईले अरुमाथि गरे जस्तै यौ#न दु#र्व्यवहार तपाईको छोरीमाथि कसैले गरीदियो भने? सोच्नुहोस त! त्यौ दिन तपाईको लागि कस्तो हुनेछ!!
यूट्यूब मा सबैले आत्यदिक मन पराएको र भाइरल भएको प्रकाश सपुतको ‘मेरोपनि होइन र यो देश’ हेर्नुहोस [ भिडियो सहित ]
टेकु अस्पतालमा देखियो यस्तो सम्म… तेसैले आफ्नो स्वस्थीय को ख्याल गर्नुहोला